Gary Neville: ‘Cristiano Ronaldo Niyad jab iyo cadaadis weyn Ayuu kala kulmidoonaa Ole Gunnar Solskjaer’ | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Gary Neville: ‘Cristiano Ronaldo Niyad jab iyo cadaadis weyn Ayuu kala kulmidoonaa...
Gary Neville: ‘Cristiano Ronaldo Niyad jab iyo cadaadis weyn Ayuu kala kulmidoonaa Ole Gunnar Solskjaer’
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United kabtan Gary Neville ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo gelin doono “cadaadis aad u weyn” oo uu saaro Red Devils ah gaar ahaan Tababaraha kooxda Ole Gunnar Solskjaer hadii uu sii wado sida qaabka liita ee mararka qaar uu sameeyo.
Ronaldo ayaa laga saaray safka hore kulankii Everton galabnimadii Sabtida laakiin wuxuu u muuqday badal qeybtii labaad kulankii barbaraha 1-1 ku dhamaaday ee Old Trafford.
Toffees -ayaa bar-baro ku qabatay united ciyaartii Premier League, Ronaldo ayaana tusay sida uu uga xun yahay isagoo xoog ku galay tunnel -ka wax yar kadib markii garsooraha siiriga afuufay.
Neville ayaa qirtay in dhaqanka 36 jirkaan uu cadaadis weyn saari doono Solskjaer, kaasoo mar kale arkay booskiisa hogaaminta oo la dhaleeceeyay ka dib natiijooyin aan Wanaagsaneyn.
“Waan daawaday ciyaarta waxaanan daawaday isaga oo iska baxaya, ma dhihi karo waan ka helay, Cristiano miyuu xanaaqsan yahay marka uusan ciyaarin? Haa. Cristiano miyuu xanaaqsan yahay marka uusan gool dhalin? marka kooxdu aysan guulaysan? Dabcan, ”Neville ayaa ka sheegay Podcast -ka Gary Neville .
“Waan ognahay waxyaabahaas. Ma aha inuu caddeeyo taas. Wuxuu ka baxaa garoonka, isagoo ismuujinaya, kaasoo su’aalo keenaya. Muxuu leeyahay? Yuu ka xanaaqsan yahay? maamulaha.
“Cristiano waa caqli ku filan inuu ogaado falalka caynkaas oo kale ah oo cadaadis dhab ah ku keenaya tababaraha – in ka badan inta uu hadda ku hoos jiro. Waa waxa ay tahay, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay wax ay tahay in la maareeyo labada bilood ee soo socda.
“Cristiano had iyo jeer ma doonayo inuu goolal dhaliyo, waxaana laga yaabaa inuusan ciyaari karin kulan walba. Laakiin haddii uu sidaas u sii socdo, waxay cadaadis weyn saari doontaa Ole Gunnar Solskjaer.”
Ronaldo ayaa dhaliyay shan gool lix kulan oo uu u saftay kooxda 20-ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska tan iyo markii uu kaga soo laabtay kooxda Juventus qeybihii dambe ee suuqii xagaaga.
Previous articleGary Neville oo Sheegay Sida Fudud ee Manchester City ku Qaadi laheyd Horyaalka Sanadkan
Next articleWakiilada beesha caalamka oo war cusub soo saaray iyo farriin culus oo loo diray…